वैदेशिक रोजगारीबाट चैतमा फर्किएका २७ वर्षीय भागेश्वरले जब आफ्नै बुबा र श्रीमतीबीच अनैतिक यौन सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछी….. – Classic Khabar
वैदेशिक रोजगारीबाट चैतमा फर्किएका २७ वर्षीय भागेश्वरले जब आफ्नै बुबा र श्रीमतीबीच अनैतिक यौन सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछी…..
August 24, 2021 173
८ भदौ । आफ्नै श्रीमती र बुबाको ह’त्या गरी खा’ल्डोमा गा’ड्ने एक पुरुष पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ५ ललिया निवासी २७ वर्षीय भागेश्वर मण्डल रहेका छन् ।
केहि दिन अघि मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका भागेश्वरले सोतमबार राति १२ बजे ५५ वर्षीय बुवा रामवृक्ष र २४ वर्षीया श्रीमती अमिरकादेवीको ह’त्या ग’रे का हुन् । ह’ त्या प छि दुवैको श व छिमेकी रामकिसुन मण्डलको आँपको बगैंचामा खा ल्डो ख’नेर गा’डे’को खु’ल्न आएको छ ।
बिहान उनका ३ ४ वर्षका बच्चा रुन थालेपछि छिमेकीले थाहा पाइ दुवै हत्या भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खवर गरेका हुन् । तत्काल प्रहरी पुगी भागेश्वरलाई नियन्त्रणमा लिई अनुशन्धान गर्दा उनले ह’त्या ग’रे’को स्विकार गरेका बताइएको छ ।
उनले भनेको ठाउँमै उत्खनन् गर्दा दुवै शव समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । पारिवारिक विवादका कारण आफुले दुवैको हत्या गरेको निजले प्रहरी सामु कबुल गरेका छन् । घटनाको थप अनुशन्धान भने भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevप्रेमीकाको १० महिनाको छोरा लागेका २६ वर्षीय दानबहादुर प्रेमीले दिए प्रहरीलाई छक्क पार्ने बयान ?
Nextम अविवाहित हुँ, यौ,न आ,नन्द पनि लिइरहेकी छुः दीपाश्री निरौला
यिनै हुन् नयाँ कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी नर्स अनिशा, ३ महिनाकी छोरी बनिन टुहुरी ! एकदमै छिट्टै सिरियस बनायो नयां कोरोनाले !